पत्रकारहरु सँग किन भड्कीइन् यामी गौतम? यामीले बैबाहीक सम्बन्ध तोडेकी श्वेता रोहीराको आरोप « News24 : Premium News Channel
पत्रकारहरु सँग किन भड्कीइन् यामी गौतम? यामीले बैबाहीक सम्बन्ध तोडेकी श्वेता रोहीराको आरोप
नायिका यामी गौतम पत्रकारहरु सँग भड्कीइन् की जब उनलाई पुल्कीत सम्राटको पत्नीले लगाएकी आरोपको बारेमा सोधियो । फिल्म सनम रे को सहकलाकार पुल्कीतको पत्नि श्वोता रोहीराले यामीलाई उनिहरुको बैबाहीक सम्बन्धलाई तोडिदिएकी आरोप लगाएकी छिन् ।
पुल्कीत र श्वेताले बैबाहीक सम्बन्धमा बाँधिएको १ वर्ष पछि उनिहरु २०१५ मा छुट््िटएका थिए । तत्पश्चात ३२ वर्षिय पुल्कीत यामी गौतम सँग रीलेशन छन् । भर्खरै एक साक्षात्कारमा श्वेताले यामी गौतमले श्वेता र पुल्कीतको बैबाहीक सम्बन्ध तोडेकी आरोप लगाएकी छिन् ।
यामी गौतम माथीको सोही आरोप माथि पत्रकारहरुले प्रश्न गरेका थिए, तर उक्त प्रशन माथी यामी भड्कीइन्,“यो निकै राम्रो समारोह हो, तापाईहरुले किन बेकारको प्रश्न गर्नु भएको ? मैले यस प्रश्नको उत्तर दिन याहाँ आएकी होईन । कृपया यस समारोह बाहेकका प्रश्न नगर्नु होला ।” यामीले उक्त समारोहमा फेशन शौ सँगै मिडियाहरु सँग कुरा पनि गरीन् । यामीले सो समारोहमा डिजाईनर अनिता डोगेरको लागी र्याम्प पनि नापिन् ।